IJustControl.it: Yenza Ngokuzenzekelayo Ukuqoqwa Kwedatha Kuziteshi Kuzo Zonke Iziteshi | Martech Zone
Ukumaketha kwedijithali kuqhutshwa yisidingo sokwenza ngokwezifiso okukhulu: imithombo emisha yedatha, inhlanganisela entsha yobambiswano, amanani aguqukayo, izimo ze-UA eziyinkimbinkimbi, njll. Ngokuqondene nekusasa lomkhakha wethu, lithembisa ukuba yinselele enkulu futhi luyimbudumbudu.
Kungakho ochwepheshe abaphumelelayo nabafisayo badinga ukuzisebenzisela ukubhekana nezimo ezinzima nezithombe eziyinkimbinkimbi. Kodwa-ke, amathuluzi amaningi akhona asanikeza indlela ephelelwe yisikhathi 'yobukhulu obufanele bonke'. Ngaphakathi kwalolu hlaka lokuqala, zonke izimo zokumaketha ezinqunyiwe zanqunywa kwasekuqaleni, ngaphandle kwamathuba okuhlanganisa izidingo zomuntu ngamunye ngokuphelele. Ngasikhathi sinye, uSathane uhlala enemininingwane.
Ngokunjalo, imakethe yanamuhla idinga amabhokisi wamathuluzi kunamathuluzi, ukuze amakhasimende azenzele imithetho yawo, ukuhamba kwedatha, amamethrikhi, njll.
Mvu, isixazululo esisha sezibalo ezithuthukisiwe zedatha, ngumzamo wokugcwalisa leli gebe. Kulesi siqephu, kunikezwa ukubukwa okufushane kwaleli bhokisi lamathuluzi elisha lokumaketha kwedijithali. Ukukhombisa amandla aphelele weJustControl.it, le ndatshana ifaka izibonelo ezimbalwa ezisebenzayo zokuthi ithola kanjani, icubungule futhi iguqule kanjani idatha.
Uhlolojikelele lomkhiqizo weJustControl.it
IJustControl.it ibekwe ngokusemthethweni njengesixazululo esenza ukuthi amabhizinisi akwazi ukulawula ngokuphelele ukusetshenziswa kwemali kwesikhangiso, ahlole ukusebenza komkhankaso ezinhlobonhlobo ezinhle zeziteshi, futhi akhiqize imibiko eyenziwe ngesikhathi esifanele. Ngakho-ke, ithembisa ukusebenza kahle kwe-ETL injini namandla we-automation yedatha ngokuya ngemithombo eminingi ku-UI eyodwa.
Njengamanje iqembu leJustControl.it lithi cishe imithombo yedatha engama-30 ingaxhunyaniswa ngokushesha kumakhasimende ayo.
Ngasikhathi sinye, isidlali esisha sigcizelela ukuthi singasebenza kalula noma imuphi umthombo wedatha ngokufunwa. 'Umbuthano' wamanje ubunjwe futhi wachazwa amaklayenti awo. Uma kuvela isidingo sokuxhumanisa esisha, sizoxhunywa mahhala. Uhambo lwamakhasimende olujwayelekile kanye nenqubo yokugibela, ngokusho kwe-JustControl.it, kubukeka kanjena.
Lapho nje sekulethwe iseshini yedemo, iqembu leJustControl.it licela ikhasimende ukuthi ligcwalise kafushane ukumboza yonke imininingwane yesibonelo sedatha bese lixhuma imithombo ethintekayo kwi-akhawunti yabo yeJustControl.it.
Ngemuva kwalokho, isimo sesampula - esinayo yonke imininingwane ehambisana nayo - siyasethwa futhi senzelwe.
Lapho isimo sesilungisiwe, kwenziwa umbiko owenziwe ngokwezifiso. Imiphumela yayo bese iqinisekiswa ngokuqhathaniswa nezibalo zekhasimende.
Ekugcineni, zonke ezinye izimo ziyasetshenziswa.
IJustControl.it ikhishwe kungekudala. Yingakho kungakashicilelwa kangako ukubuyekezwa komphakathi kuze kube manje. Ngasikhathi sinye, sekuvele kukhona abanye omuhle impendulo iyatholakala. Izinkampani zichaza ukwethembeka kwemibiko yedatha eluhlaza, amandla wokwenza ngokwezifiso abanzi ahlobene nokucutshungulwa kwedatha nokwenza imephu, kanye nokwenza lula.
Kungaba okuthakazelisayo ukubheka ukuthi iJustControl.it ikufanele kanjani lokho kubuyekezwa okuhle.
Mvu Amandla wokucubungula idatha
Ngokusho kwethimba leJustControl.it, isixazululo sabo asikwazi nje kuphela ukukhipha idatha eluhlaza 'njengoba sinjalo', kodwa futhi nokunye okunye.
Okokuqala, ibhokisi lamathuluzi likhipha idatha eluhlaza. Emagameni omkhankaso, kungabonakala amathegi wamazwe, abaphathi nezinkundla. Kuthiwa lokho, nge Mvu, ayikho imikhawulo kunoma yiluphi uhlobo lomkhankaso. Inani elingenamkhawulo lezilinganiso nezihlungi zazo zithembisiwe, kanye nenombolo engenamkhawulo yamakholomu, womabili ama-KPI abaliwe namamethrikhi. Ukukhishwa kwemethadatha nakho kube ngokoqobo.
Ngemuva kwalokho, idatha ihlungwa ngabaphathi, amapulatifomu, abaphathi, njll.
Esigabeni sesithathu, imininingwane ehlobene nenzuzo evela kubathrekhi kanye / noma izixazululo zangaphakathi ze-BI zingangezwa futhi zihlanganiswe.
Lapho idatha enjalo ingeziwe, imininingwane ephathelene nemithombo nolunye 'amathegi' wedatha angangezwa.
Ekugcineni, izihlungi zamazwe namapulatifomu kuyo yonke imithombo exhunyiwe zisethiwe. Njengomphumela, isithombe esisodwa sisuselwa kwizicucu zedatha ezahlukahlukene siyakhiwa. Lokho kusho ukuthi, umbiko odingekayo ekuthathweni kwezinqumo ungakhiwa.
Ngokuqondene nokubukeka kwamanje nokuzizwa kwesixazululo, amasampula alandelayo akhombisa.
Ideshibhodi ejwayelekile enebanga ledatha elingenzeka:
Ideshibhodi ejwayelekile enokukhethwa kobukhulu bedatha yangokwezifiso ekhethiwe:
Ideshibhodi ejwayelekile enesampula yezihlungi zangokwezifiso ezifakiwe
UJustControl.it uqokomisa ukuthi amandla wokwenza ngokwezifiso amakhono ashiwo ngenhla empeleni awanamkhawulo. Esigabeni esilandelayo, ungabona ukuthi yiluphi uhlelo olunika amandla lokhu okungenamkhawulo.
Mvu Ukubeka Isimo Sibonelo
Leli cala lisuselwa emisebenzini eyenziwa yinkampani ethenga imidiya isebenzisa imithombo ecishe ibe ngama-40, kufaka phakathi i- Izinhlelo zokusebenza tracker namanethiwekhi. IJustControl.it yenze ngesandla imibiko emibili ehlanganisa izidingo zamakhasimende.
Umbiko wokuqala ungumphumela walokhu kugeleza kokusebenza kwedatha: idatha ehlanganisiwe eluhlaza ehlobene nokusetshenziswa kwesikhangiso kuyo yonke imithombo esebenzayo. Icubungula yonke idatha ngokuphelele ngenkathi ithatha izakhiwo zayo ngokucatshangelwa (njengamaqembu ahambisanayo kuye kumthengi ngamunye, iziteshi, njll.).
Umbiko wesibili uhlose ukuhlinzeka isithombe esingeke sibhekane nedatha eluhlaza, kepha ngamamethrikhi abaliwe - lawo abalwa khona lapho futhi asuselwa kumafomula enziwa ngezifiso. Ububanzi bangempela bamamethrikhi buhlanganisa ubukhulu obulandelayo.
Ukuze kwenzeke lokhu, iqembu leJustControl.it lenze ukulandelana okukhethekile kwezenzo eziboniswe ngezansi.
Kuyaphawuleka ukuthi yi- Mvu iqembu lokusekela lelo ukwakha ukugeleza kokucubungula idatha. Kodwa-ke, umhlinzeki wesixazululo ucabanga ukuthi, ngemuva kwesikhashana, leli khono lizotholakala kumakhasimende ukuze akwazi ukuzakhela awabo.
Njengamanje, isivivinyo samahhala senyanga eyodwa siyatholakala. Ama-ejensi edijithali nabathuthukisi bohlelo lokusebenza banga-oda i-demo futhi bayihlole bebodwa ku Mvu. Lapho amakhasimende amaningi iJustControl.it enayo, imithombo engaphezulu azoyihlanganisa ukuze isetshenziswe ngokushesha.
Ukuhlanganiswa komthombo wedatha njengamanje kufaka iGoogle, i-Facebook Ads, TikTok, CSV, Excel, YouAppi, AD Colony, adcash, Adperio, ADSKEEPER, Adsterra Network, Affise, AppSamurai, APPLIFT, appnext, AppsFlyer, adjust, BeaverAds, Chartboost, Clickadu, EngageYa, ExoClick, Fyber, IronSource, Liftoff, mgid, VK, Yandex Direct, MyTarget, PropellerAds, Remerge, Revcontent, RichPush, Snapchat, Tapjoy, UNGADS, ubunye ADS, Vungle, Mintegral, neZeropark.
Tags: AD ColonyadcashlungisaI-AdperioU-ADSKEEPERInethiwekhi ye-AdsterraI-Adsterra_networkAffiseUhlelo lokusebenza SamuraiSEBENZISAisengezoIzinhlelo zokusebenza IflayaUhlelo lokusebenzaSamuraizinhleisenzoUkuhlaziywa kwesichasisoIzikhangiso ze-BeaverIshadiBoostI-Clickaduukunikezwa kwesiteshi esinqamulaCSVZibandakanyeYakakhuluexoclckexoChofozaFacebookizikhangiso ze-facebookUFybergoogleInsimbi_SourceironSourceingabank.itsukumisamgidi-mintegralmyTargetI-PropellerAdsIsikhumbuzoRevcontentI-RichPushSnapchatTapjoyTikTokTwitterUNGADSubunye ADSubunyeADSvkIVoluumIhlathiYandexI-Yandex DirectYouAppiI-Zeropark